Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/miakatra.mg.av
Aleo ny eranambatry "manomboa," toy izay ariary "aza manombo". [Veyrières 1913 #4265, Cousins 1885 #109]
Kobaka am-bava, volana an-tenda: hatreo no ho miakatra. [Cousins 1885 #1279]
Proverbe Fanangan-kena : midina mahazo ny tratrany, miakatra mahazo ny trafony. [Rinara 1974 #1087, Cousins 1885 #913]
Proverbe Matoa manandrana, dia homana, matoa manohatra, dia miakatra. [Rinara 1974 #2183, Cousins 1885 #1680]
Tapia tsy miakatra Imerina, amberivatry tsy midina Imamo. [Veyrières 1913 #333, Cousins 1885 #3042, Houlder 1895]
Proverbe Omby miakatra antoandro, ka mikaroka voly horaotina. [Veyrières 1913 #4562, Cousins 1885 #2554]
Proverbe Tsy mety rehefa niakatra ho rahona, ka vao hidin-ko zavona. [Cousins 1885 #3500]
Vary iray no nafafy, ka vary zato no niakatra. [Cousins 1885 #3618, Nicol 1935 #237]
Proverbe Vavy antitra maka kitay : midina, manahy ny tsy hahazo; miakatra, manahy ny tsy hahazaka. [Cousins 1885 #3647]